How long should you wait to conceive after abortion – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
How long should you wait to conceive after abortion
ကိုယျဝနျပကျြကတြယျဆိုတာ ဘယျမိဘမှမကွုံခငျြတဲ့စိတျထိခိုကျစရာ အဖွဈအပကျြတဈခုပါ။ကွုံတှရေ့တဲ့မိခငျအနနေဲ့ဆိုရငျ ဒီဖွဈရပျအတှကျ အပွဈရှိသလိုခံစားရလရှေိ့တယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဒီအဖွဈအပကျြ ကွုံဖူးတဲ့ မမေတှေဟော နောကျကိုယျဝနျကိုရလြှငျရ ခွငျးထပျယူခငျြတဲ့ သဘာဝလညျး တှရေ့တတျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကိုယျဝနျပကျြကပြွီးတာနဲ့ ခကျြခွငျး ကိုယျဝနျထပျယူသငျ့ပါသလား? လို့မေးခဲ့ရငျတော့
အဖွကေ – ကိုယျဝနျပကျြကပြွီးတာနဲ့ နောကျကိုယျဝနျတနျးပွီးမယူသငျ့ပါဘူးလို့ဖွရေပါလိမျ့မယျ။ခန်တာကိုယျရဲ့ သဘာဝအရ ကိုယျဝနျပကျြကတြယျဆိုရငျ သားအိမျကိုအနားပေးဖို့လိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရှပေ့ကျြကထြားတဲ့ကိုယျဝနျရဲ့စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ လူပငျပနျးမှုတှကေနေ အနားယူပွီးမှ နောကျကိုယျဝနျယူသငျ့ပါတယျ။လောလော ဆုံးဖွတျပွီး ခကျြခွငျးယူမယျဆိုရငျ နောကျကိုယျဝနျအတှကျစိတျရော လူပါအဆငျသငျ့မဖွဈတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။အကောငျးဆုံးကတော့ ကိုယျဝနျပကျြကပြွီး ” ၃လ ၊ ၄လလောကျမှသာ” နောကျကိုယျဝနျယူသငျ့ပါတယျ။အကွောငျးရငျးကတော့ ကိုယျဝနျပကျြကသြှားတဲ့အခြိနျမှာ သားအိမျကပြော့သှားတဲ့အပွငျပကျြကတြဲ့အခြိနျသှေးဆငျးတာကွောငျ့ ခန်တာကိုယျအားနညျးနတေတျပါတယျ။သားအိမျပြော့တဲ့အခါမှာ နောကျတဈကွိမျ ကိုယျဝနျခကျြခွငျးတနျးယူရငျသန်တသေားတှယျကပျခွငျး မပွုနိုငျဘဲ နောကျတဈကွိမျ ပကျြကတြာမြိုးဖွဈနိုငျလို့ပါ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျပကျြကပြွီး ၃လ၊ ၄လလောကျထိကိုစိတျခရြတဲ့ သားဆကျခွားနညျး သုံးပွီး မှ ကလေးထပျယူသငျ့ပါတယျ။နောကျကိုယျဝနျမယူခငျမှာ Folic acid သောကျထားသငျ့ပါတယျ။ကိုယျဝနျမယူခငျမှာလညျး ဆရာဝနျနဲ့ဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီး နှလုံး၊ ဆီးခြို၊သှေးတိုးရောဂါရှိပါက ကွိုတငျကုသထားနိုငျရငျ နောကျကိုယျဝနျအတှကျအကောငျးဆုံးပွငျဆငျပွီးသားဖွဈနမှောပါ။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုတာ ဘယ်မိဘမှမကြုံချင်တဲ့စိတ်ထိခိုက်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ကြုံတွေ့ရတဲ့မိခင်အနေနဲ့ဆိုရင် ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် အပြစ်ရှိသလိုခံစားရလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီအဖြစ်အပျက် ကြုံဖူးတဲ့ မေမေတွေဟာ နောက်ကိုယ်ဝန်ကိုရလျှင်ရ ခြင်းထပ်ယူချင်တဲ့ သဘာဝလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်း ကိုယ်ဝန်ထပ်ယူသင့်ပါသလား? လို့မေးခဲ့ရင်တော့
အဖြေက – ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးတာနဲ့ နောက်ကိုယ်ဝန်တန်းပြီးမယူသင့်ပါဘူးလို့ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ခန္တာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝအရ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုရင် သားအိမ်ကိုအနားပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှေ့ပျက်ကျထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ လူပင်ပန်းမှုတွေကနေ အနားယူပြီးမှ နောက်ကိုယ်ဝန်ယူသင့်ပါတယ်။လောလော ဆုံးဖြတ်ပြီး ချက်ခြင်းယူမယ်ဆိုရင် နောက်ကိုယ်ဝန်အတွက်စိတ်ရော လူပါအဆင်သင့်မဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး ” ၃လ ၊ ၄လလောက်မှသာ” နောက်ကိုယ်ဝန်ယူသင့်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ သားအိမ်ကပျော့သွားတဲ့အပြင်ပျက်ကျတဲ့အချိန်သွေးဆင်းတာကြောင့် ခန္တာကိုယ်အားနည်းနေတတ်ပါတယ်။သားအိမ်ပျော့တဲ့အခါမှာ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ်ဝန်ချက်ခြင်းတန်းယူရင်သန္တေသားတွယ်ကပ်ခြင်း မပြုနိုင်ဘဲ နောက်တစ်ကြိမ် ပျက်ကျတာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး ၃လ၊ ၄လလောက်ထိကိုစိတ်ချရတဲ့ သားဆက်ခြားနည်း သုံးပြီး မှ ကလေးထပ်ယူသင့်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ဝန်မယူခင်မှာ Folic acid သောက်ထားသင့်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်မယူခင်မှာလည်း ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး နှလုံး၊ ဆီးချို၊သွေးတိုးရောဂါရှိပါက ကြိုတင်ကုသထားနိုင်ရင် နောက်ကိုယ်ဝန်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။
Breastmilk Treatment for the Eyes